अजयको मलाई कम्पेन्सेसनले - Youtube वाच - साप्ताहिक
अजयको मलाई कम्पेन्सेसनले
असार १०, २०७३
गायक अजय अधिकारी ‘सुशील’ ले गाएको सिंगल ट्रयाकको एल्बम ‘यो कस्तो रहर’ काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको छ । हास्य अभिनेताद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौडेल, डा.उपेन्द्र महतो, उत्तम सञ्जेलसहितको समुहले उक्त एल्बम सार्वजनिक गरेको हो ।
एल्बममा प्रेमीकालाई गरेको खर्चको क्षतिपूर्तिको माग गर्दै गरेको बोलको ‘मलाई कम्पेन्सेसनले...’ शीर्षकको गीत समावेश छ । यो गीतमा गायक अधिकारीकै शब्द तथा संगीत सुन्न सकिन्छ । समारोहमा उक्त गीतको म्युजिक भिडियो पनि सार्वजनिक गरियो । विशाल भण्डारीद्वारा निर्देशित उक्त भिडियोमा केकी अधिकारी तथा गम्भिर विष्टले अभिनय गरेका छन् ।
मलाई कम्पेन्सेसनले.. को म्युजिक भिडियो :
प्रकाशित :असार १०, २०७३
के मलाई एचआईभी सर्‍यो ?
अजयको बर्थ डे गिफ्टमा मेलिना राई पनि
नुतन भुसालको 'मखमली चोली'
म १७ वर्षीया युवती हुँ । मलाई रात परेपछि बढी उत्तेजना फिल हुन्छ । किन होला ?
के गर्ने के नगर्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ
निश्चललाई स्वस्तिमा मन परेपछि आश्विन १६, २०७६
शान्ता चौधरीको फेरिएको परिचय आश्विन १५, २०७६
‘दबंग ३’मा सलमान अवतार, यस्तो छ प्रोमो आश्विन १४, २०७६